Akụkọ - Akuko Global Fiber Glass Mesh Market na-ewetara usoro ụlọ ọrụ ọhụụ, ihe ọhụụ, na data ahịa amụma
Faiba glaasi Direct Roving
Faiba glaasi Yarn
Faiba glaasi ute
Faiba glaasi Eberi Strand Mat
Faiba glaasi agịga ute
Faiba glaasi Fabric
Faiba glaasi teepu
Self nrapado teepu
Akuko Global Fiber Glass Mesh Market Report na-ewetara usoro ulo oru ohuru ohuru, ihe ohuru, na data ahia ahia
Akụkọ a na-enye nkọwa zuru ezu banyere ụlọ ọrụ Fiber Glass Mesh dabere na nha ahịa, uto Fiber Glass Mesh, atụmatụ mmepe, na ohere. Amụma ahịa amụma, nyocha SWOT, Fiber Glass Mesh na-atụ egwu, na ọmụmụ ihe nwere ike ịbụ akụkụ ndị dị mkpa nyochara na akụkọ a.
Akụkọ ahụ na-enyocha ma nyochaa mmetụta nke ọrịa Covid-19 na ụlọ ọrụ Fiber Glass Mesh, na-eburu n'uche ohere na nsogbu, mkpali, na ihe ize ndụ. Ọ na-enyocha mmetụta nke Covid-19 na ndị na-emepụta Fiber Glass Mesh ma na-enye amụma amụma uto nke ahịa dabere na ọnọdụ dị iche iche (nchekwube, enweghị nchekwube, ezigbo nchekwube, o yikarịrị, wdg.)
Multiaxial fabric bụ non-crimp, multi-axis na multi-laye mkwado akwa.
Layer count, nghazi, ibu na eriri ọdịnaya nke n'ígwé iche iche dabere na ngwaahịa akara na ngwa. A na-etinye akwa ahụ site na yarn polyester.
Enwere ike ịmepụta akwa site na iji ọtụtụ axis (0 Celsius, 90 Celsius, + 45 Celsius, -45 Celsius) ma ọ bụ jikọta ya na mpempe akwụkwọ na ọtụtụ akwa mkpuchi na / ma ọ bụ ihe ndị a kpara.
Typicaldị ngwa nke akwa multiaxial bụ ike ikuku, mmiri ma ọ bụ ụlọ ụgbọ mmiri, egwuregwu ma ọ bụ oge ezumike, ụgbọ ala, ikuku na nchekwa.
A na-etinye akwa ma ọ bụ ọtụtụ nke rovings dị iche iche. A na-etinye akwa nke rovings n'ụzọ dị iche na njupụta dị iche iche. Fabricdị dị otú ahụ na ntupu ntaneti bụ Multiaxial Fabric nke a na-akpọ MWK na nkenke. Ọ dakọtara na UP, Vinylester na epoxy wdg.
A na-eji ngwaahịa a eme ihe na ike ikuku, ụlọ ọrụ ụgbọ mmiri, ụgbọ ala, ụgbọelu, ohere na egwuregwu. Isi ọgwụgwụ ngwaahịa na-agụnye ifufe blasdes, FRP ụgbọ mmiri hulls, ụgbọala n'èzí oyiyi akwa, ụgbọelu na ohere ngwaahịa wdg
Mgbapu Mgbidi Mpụga
Eriri Glass Roofing anụ ahụ ute ngwaahịa na-bụ-eji dị ka ndị magburu onwe substrates maka mmiri na-àmà roofing ihe. Ihe ejiri mara ya bu ike di elu, iguzogide corrosion, na nfe kari site na bitumen na ndi ozo. Enwere ike ịbawanye ike na ogologo oge na nkwụsị mmiri site na itinye ihe nkwado n'ime anụ ahụ n'ofe ya dum. Mmiri mmiri na-ekpuchi mmiri nke ejiri ihe ndị a mee adịghị mfe ịgbawa, ịka nká na ire ere. Uru ndị ọzọ nwere akwa anụ ahụ na-enweghị mmiri bụ ike dị elu, ịdị n'otu magburu onwe ya, ịdị mma ihu igwe dị mma, na nguzogide nkwụsị.
The iko ute maka FRP elu nwere eriri dispersion, ezigbo n'elu, adụ aka-mmetụta, ala nragide ọdịnaya, ngwa ngwa resin impregnation na ezi ebu nrubeisi nke-eme ka ọ kasị gbasara ndị ọzọ FRP ịkpụzi Filiks dị ka pịa ịkpụzi, ịgba-elu, centrufugal na-agbanwe agbanwe agbanwe.
1.C-iko anụ ahụ eji na igwe ma ọ bụ na-aga n'ihu ime mado aka mere nke faiba glaasi ngwaahịa (FRP), efere, pipeline, uzo, Mkpọ, ụgbọ mmiri, tub ngwaahịa.
2.E-iko faiba glaasi chere eji maka mkpa epoxy mgbe ego na eletriki mkpuchi ngwaahịa.
3.Alkali iko eriri mkpa chere na-eji na batrị nke iche, waterproofing ụlọ, plasterboard bụ panel, plastic n'ala na chemical anwụrụ lined na leakage, corrosion àgwà ihe.
Owuwu A, Zijingguandi, District Qiaodong, Xingtai City, Province Hebei